Hayat Foundation oo deeq lacageed gaarsiisay dhismaha isbitaalka Camaara - Ceelhuur Online
Home > Caafimaadka > Hayat Foundation oo deeq lacageed gaarsiisay dhismaha isbitaalka Camaara
Caafimaadka Wararka Galmudug Wararka Maanta
September 13, 2018 admin391
Hay’adda Hayat foundation Ayaa deeq lacageed soo gaarsiisay dhismaha Isbitaalka Guud ee Camaara gobolka Mudug. Deeqdan lacageed oo gaareysa 4000 dollar ayaa ka timid Jaaliyadda Deegaanka ee degan dalka Mareykanka.
Madaxa Hayadda Hayat foundation Safiyo Cabdulahi Barre ayaa uga mahad celisay dhamman intii ka qeyb qaadatay soo ururinta deeqda iyo intii ku soo dhaweysay Lana shaqeeysay intii ay joogtay Minneapolis.
Deeqdan waxaa Isbitaalka Guud ee Degmada Camaara soo gaarsiiyay Cabdulqaadir Sayid Ahmed oo ka mid ah howlwadeenada Hay’adda Hayat foundation, waxa uuna deeqdaas lacageed ku wareejiyay Guddigga horumarinta isbitaalka Camaara oo ay hogaaminayaan Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Warsame iyo Sheekh Xassan Camaara.
Bulshada degan Camaara ayaa wada dhismaha isbitaal, iyagoo howshan ku wada qaab isku tashi ah. Waxaana meel wanaagsan maraya dhismaha isbitaalka oo la filayo inuu daboolo baahidda caafimaad ee deegaankaas.
Dhanka kale Hayat Foundation ayaa horey gacan uga geysatay dhismaha iyo qalabeyn isbitaalo, iskuulo iyo goobaha adeegga dad weynaha deegaanada Galmudug.
Gudoomiye M. Mursal oo la kulmay musharaxiinta Koonfur Galbeed
Hiirshabelle: Madaxwayne Waare oo Safar lama filaan ah ku tagaya Buulo-Burde & Jalalaqsi
Yusuf Garaad oo New York kula kulmay Wasiirka Socdaalka Canada
September 20, 2017 Cali Yare